ဣ Hayes: An Arizonan Iwo Jima မှာအမေရိကန်အလံမှပေါက်ဖွားလာသူ
by ဂျူဒီ Hedding
သူရဲကောင်းများကျော်လွှားစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့နဲ့တစ်နည်းနည်းနဲ့နိုင်မှပဌနာကြသူနေ့တိုင်းလူတွေရှိပါတယ်။ ဣဟေးယက်, full-သွေး Pima အိန္ဒိယ, အ Gila မြစ်အိန္ဒိယ Reservation များရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်ရုံအနည်းငယ်မိုင်တောင် Chandler, အရီဇိုးနား , ဇန်နဝါရီလ 12, 1923. အပေါ်သူနန်စီနှင့်ဂျိုး Hayes မှမွေးဖွားသူကလေးရှစ်ယောက်ရဲ့အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
ဣ Hayes မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဖတ်ရှုဖို့သူတို့ကိုအားပေးတိုက်တွန်းခြင်းနှင့်သူတို့အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်ပညာရေးတယ်သေချာလုပ်, သူမ၏ကလေးများကျယ်လောင်စွာကျမ်းစာဖတ်တဲ့သူကသူ့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဘာသာရေး Presbyterian မိခင်ကဆောင်ခဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့, ဓမ္မနည်းနည်းကောင်လေးခဲ့သည်။
ဣ Sacaton အတွက်မူလတန်းကျောင်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးကောင်းသောအဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးစီးအပေါ်သို့သူလည်းတစ်ဦးအနေဖြင့်အလွန်ကောင်းစွာပြု၏ရှိရာ Phoenix မြို့ကအိန္ဒိယကျောင်း, ဝင်ကြ၏။ 19 နှစ်အရွယ်မှာ 1942 ခုနှစ်တွင်သူသည်ကျောင်းထွက်နှင့်သူယှဉ်ပြိုင်သို့မဟုတ်စီးပှားရေးဖြစ်လူသိများဘယ်တော့မှခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်း, မရိန်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အပေါ်ဂျပန်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ပုလဲဆိပ်ကမ်း , သူအစေခံရန်သူ၏မျိုးချစ်စိတ်တာဝန်ခံစားရတယ်။ အနှယျဝအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဣစည်းကမ်းနှင့်စိန်ခေါ်မှု၏စစ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကောင်းစွာပြု၏။ သူကလေထီးသင်တန်းလျှောက်ထားခြင်းနှင့်လက်ခံခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ဂျိမ်း Bradley, သူ့စာအုပ်ထဲတွင် "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများ၏အလံများ," သူ၏သူငယ်ချင်းများကသူ့ကိုဟုအမည်ပေးထားသည့်ကပြောပါတယ် "ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တိမ်တိုက်ကျဆင်းလာ။ " ဣတောင်ပစိဖိတ်ထံသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။
ဣဟေးယက်နှင့် Iwo Jima
Iwo Jima 700 မိုင်အကြောင်းကိုအလွန်သေးငယ်သောမီးတောင်ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုကျို၏တောင်ဘက်။ တောင်ပေါ်က Suribachi 516 ပေ၏တစ်ဦးမြင့်မှာအမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမဟာမိတ်တစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးအမှတ်ကြီးကထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းမှရန်သူကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 19, 1945 တွင်, မရိန်းတပ်သားတစ်ဦးကြီးများကဆက်ပြောပါတယ်ဂျပန်နောက်ခံလူတစ်ဦးအညီအမျှသိသိသာသာစစ်တပ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်ကျွန်းပေါ်တွင်ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ တိုက်ခိုက်ရေး၏ bloodiest, အပြင်းထန်ဆုံးလေးရက်တမရိန်း Guadalcanal မှာစစ်တိုက်ရာလပေါင်းများစွာအတွင်းထက်ပိုထိခိုက်သေဆုံးမှုလုယူသောများ၏သင်ရိုးထဲမှာလာတော့သည်။ ဖြစ်ရပ်များဣဟေးယက်စတစ်ခုမျှော်လင့်မထားတဲ့အလှည့်ယူနေရာအရပ်ဖြစ်၏။
ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 1945 တွင်, လေးဆယ်ရိန်းတောင်ထိပ်ပေါ်တွင်အမေရိကန်အလံစိုက်နိုင်ရန်အတွက်တောင်ပေါ်မှာ Suribachi တက်။ ဂျိုး Rosenthal တစ်ဦးက AP ဓာတ်ပုံဆရာ, ထိုအဖြစ်အပျက်၏အတော်ကြာရိုက်ချက်များကိုယူ။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦး Iwo Jima, မကြာမီဖြစ်လာခဲ့သည်သောရုပ်ပုံလွှာမှာအလံ၏မွေးမြူရေး၏ကျော်ကြားဓာတ်ပုံဖြစ်လာခဲ့သည် နေဆဲယနေ့ကြောင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသင်္ကေတ ။ ဂျိုး Rosenthal ပူလစ်ဇာဆုရရှိခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံထဲတွင်အလံစိုက်ခြောက်ယောက်ျားအရီဇိုးနားထံမှ Pennsylvania ပြည်နယ်ထဲကနေသူ Mike Strank တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကနေ Harlon Block ကို, ကီထံမှ Franklin Sousley, Wisconsin ပြည်နယ်ကနေယောဟနျသ Bradley, New Hampshire ထံမှ Rene Gagnon နှင့်ဣဟေးယက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Strank, Block နှင့် Sousley တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါစစ်ဦးစီးဌာနသူရဲကောင်းများလိုအပ်နှင့်ဤသုံးယောက်တို့သည်ရှေးခယျြခဲ့သညျ။ သူတို့ကဝါရှင်တန်မြို့သို့ သွား. နှင့်သမ္မတ Truman တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဆိုပါဘဏ္ဍာရေးဌာနကပိုက်ဆံလိုအပ်နှင့်နှောင်ကြိုး drive ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဣ Hayes အပါအဝင်သူရဲကောင်းများ, 32 မြို့ကြီးများမှတဆင့် paraded ခဲ့ကြသည်။ ယောဟနျသ Bradley နှင့်ဣ Hayes သူတို့ pawn ခဲ့ကြသည်သောအများပြည်သူ display ကိုနာကြည်း။ Rene Gagnon ကြောင့်ခံစားရသောကြောင့်အပေါ်သူ၏အနာဂတ်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
ဘဝက Post ကို Iwo Jima
နောက်ပိုင်းဂျွန် Bradley, သူ့ရည်းစားနဲ့လက်ထပ်မယ့်မိသားစုကြီးပြင်းနှင့်ဘယ်တော့မှစစ်ပွဲတွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ ဣ Hayes ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဖို့ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ မည်သို့ပင်သူမြင်ကြုံတွေ့သူ့ကိုအတွင်းသော့ခနျြရစျ။
ဒါဟာသူသညျမိမိရဲဘော်ရဲဘက်များ၏ဤမျှလောက်များစွာသောအသေခံစဉ်အသက်ရှင်လျက်ဖြစ်ဘဲလျက်အဘို့အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရကြောင်းဆိုပါတယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူကဤမျှလောက်များစွာသောဤမျှလောက်ပိုပြီးယဇျပူဇျောခဲ့ပေမယ့်သူတစ်ဦးသူရဲကောင်းအဖြစ်စဉ်းစားခဲ့အပြစ်ရှိသလိုခံစားရတယ်။ သူ menial အလုပ်အကိုင်များမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူကအရက်၌သူ၏ဝမ်းနည်းခြင်းရေနစ်။ သူကမူးဘို့အကြောင်းကိုငါးဆယ်ကြိမ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ဇန်နဝါရီလ 24, 1955 တွင်တစ်ဦးချမ်းအေးနဲ့ dreary နံနက်ပိုင်းတွင်, ဣဟေးယက်စသေလွန်သောသူတို့သည်အတွေ့ခံ - စာသားသေလွန်သောသူတို့သည်အရက်မူး - မိမိနေအိမ်ထဲကနေပဲတိုတောင်းတဲ့အကွာအဝေး။ အဆိုပါ coroner ကမတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ဣ Hamilton က Hayes မြို့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏ Arlington အမျိုးသားသုသာန် ။ သူက 32 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
ဣဟေးယက်နှင့် Iwo Jima မှာအလံပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအကြောင်းကပို
ယောဟနျသ Bradley ပြီးနောက်, Iwo Jima အလံ raisers တစ်ဦးကသူ၏မိသားစုဆရာယောဟနျသညျမိမိစစ်မှုထမ်းခြင်းမှထားရှိမည်ခဲ့ကွောငျးအက္ခရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုအတော်ကြာ boxes တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခုနစ်ဆယ်၏အသက်အရွယ်မှာသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ဂျိမ်း Bradley, သူ့သားတဦးတည်းထိုစာရွက်စာတမ်းများ, တစ်ဦးက New York Times ကိုအရောင်းကောင်းဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ရသောကျွန်ုပ်တို့၏အဘတို့၏အလံများအပေါ်အခြေခံပြီးစာအုပ်ရေးသားခဲ့သည်။
ဒါဟာ Clint Eastwood အားဖြင့်ညွှန်ကြားထား 2006 ခုနှစ်တွင်ရုပ်ရှင်သို့ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
2016 ခုနှစ်, New York Times ကိုခြောက်ယောက်ျား၏ကျော်ကြားသောဓါတ်ပုံကို Iwo Jima မှာအလံပြုစုပျိုးထောင်ဖြစ်စေမတချို့မသေချာမရေရာဆွေမျိုးလင်းဆောင်ခဲ့သောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထုတ်ဝေယောဟနျသ Bradley ပါဝင်သည်သို့မဟုတ်မ။ အလားတူဆောင်းပါးဝါရှင်တန်ပို့စ်အားဖြင့်အတူတူပင်နေ့၌ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြခဲ့သည်တဦးတည်းအရာနှစ်ခုအလံ Raising ရှိပါပြီနိုင်ပေမဲ့, ဣ Hayes ကြောင်းအလံကြီးပြင်းသောသူတို့သညျတစျဦးဖွစျကွောငျးကိုအဘယ်သူမျှမသံသယရှိပါတယ်။
ဣဟေးယက်၏သီချင်းပတေရုသ LaFarge ကရေးသားခဲ့သည်။ Bob Dylan ကမှတ်တမ်းတင်ထားသောပေမယ့်အကျော်ကြားဆုံးဗားရှင်း 1964 တှငျမှတျတမျးတငျထားသဂျော်နီငွေရဲ့, ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဖီးနစ်: ဒါဟာတကယ်ပဲအပူပိုင်းအပူလား? အပူအညွှန်းကိန်း, ရှင်းလင်းချက်
အရီဇိုးနားအမွီးကခလောကျသံပွုတတျသောမွှေဆိုး: မြို့လောက်မှာ Slithering
အနုပညာအဘို့အ Scottsdale Center မှာနှောင်းပိုင်းတွင် Nite ဓမ်မပုစ်ဆာ
အရီဇိုးနားအတွက်အကောင်းဆုံး Spa မ်ား
ပိုများသောသန်း 10000 မိုင်: ဒါဟာမူလစာမျက်နှာနားလည်ယူကဘာလဲ
ကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့6အစားအစာအကောင်းဆုံးခရီးသွားအတွေ့အကြုံများ
Oceania သင်္ဘော၏ Riviera Cruise နဲ့သင်္ဘော - Cabin နှင့် Suites
သင်သိပါဖို့လို Oktoberfest အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသိကောင်းစရာများ
မတ်ေတာသညျမှမိသားစုများအတွက်7နယူးယောက်စီးတီးဟိုတယ်မှာ်ပူး
တစ်ဦး Single-ရထားကြိတ်စက် Coaster ဆိုတာဘာလဲ